Iza No Mandoa Vola Hanaovana Sary-Sy-Soratra Mamely An’i Alexei Navalny? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2017 12:36 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, English, Español, English
Sary-sy-soratra andoavam-bola izay mamely ny lehiben'ny mpanohitra Alexei Navalny.
Tamin'ny 5 Mey, nanomboka nahazo tolotra andoavam-bola amin'ny alalan'ny fandefasana sary-sy-soratra (meme) mitsikera ny lehiben'ny mpanohitra sady bilaogera ara-politika Alexei Navalny ireo mpitantana vondrona marobe ao amin'ny tranonkala media sosialy Rosiana Vkontakte
Nanjary hitan'ny be sy ny maro ny endrika sary-sy-soratra raha namoaka lahatsoratra ahitana pikantsary momba ny tolotra fandoavam-bola ny vondrom-piarahamonina VKontakte antsoina hoe “Sary-sy-Soratra Saro-takarina momba ny Karazan'olona Sangany Rehetra”. Milaza ny tenan'izy ireo ho solontenan'ny “sampan-draharahan'ny dokambarotra” ireo olona, ​​na ny olona tompon'andraikitra tamin'ny fampiroboroboana ny votoaty, ary efa manana Sary-sy-Soratra vonona hozaraina. Nangataka tamin'ireo mpitantana ny vondrona VKontakte izy ireo mba hamoakaa lahatsoratra alefa miaraka amin'ny Sary-sy-Soratra, ary nampanantena handola vola eo anelanelan'ny 700 sy 900 robla (12-15 dolara) isaky ny lahatsoratra isan'andro.
Na dia mbola tsy mazava aza izay ao ambadiky ny Sary-sy-Soratra, hita tamin'ny tatitry ny fantsona fahilavitra Dozhd tamin'ny 18 Aprily ny tetika momba ny fanentanana lehibe [mg] izay voalaza fa kasain'i Kremlin atao hamelezana an'i Navalny. Andro vitsy monja taty aoriana, mpiserasera iray tsy nitonona anarana namoaka lahatsary tao amin'ny YouTube, mampitaha an'i Navalny amin'i Hitler, izay raisin'ny maro fa anisan'ny fanafihana lehibe kokoa atao amin'ny mpanohitra, kandidà ho filoham-pirenena.
Tamin'ireo andiana hafatra nifanakalozana tamin'ireo mpitantana “Sary-sy-Soratra Saro-takarina,” niaiky ireo solontenan'ny orinasan'ny dokambarotra fa tsy tia “Nashism” izy ireo, na karazana tetikady ara-politika izay fampiasan'ilay mpomba ny Kremlin efa maty nandritra ny hetsiky ny tanora “Nashi”, ary nanao izany mba hahazoam-bola fotsiny ry zareo. Nilaza ihany koa ry zareo fa vondrona roa hafa, “Borscht” sy “iFeed” no efa nanaiky hizara sary-sy-soratra mampihomehy, na dia tsy ahitana votoaty manohitra an'i Navalny aza nipoitra tao amin'ny tranonkalan'izy ireo tao anatin'izay andro vitsy lasa izay.
“Mpitsikilon'i Kremlin ve i Navalny?” Sary: https://vk.com/nauka_magik.
Nandefa lahatsoratra maromaro tamin'ny Sary-sy-Soratra mamely an'i Navalny ihany nony farany ireo mpitantana vondrona maromaro, izay nalefa tao amin'ny “Sary-sy-Soratra Saro-takarina.” Nandefa Sary-sy-Soratra ny harivan'ny 5 Mey ny vondrona “Ny Mpanao Fanova-maso,” izay manana mpanjohy mihoatra ny 2,2 tapitrisa ao amin'ny VKontakte, sary-sy-soratra mitovy amin'ny fonona gazetiboky izay mivaky hoe: “Mpitsikilon'i Kremlin ve i Navalny?”
Vondrona hafa, “Siansa Mahafinaritra, Hafetsena, sy Mazika,” izay manana mpikambana 4.800 kosa nandefa ny sary mitovy ny ampitso maraina.
Sary-sy-soratra natolotry ny sampan'ny dokambarotra kosa nampiseho an'i Navalny ho toy ny mazisiana mahatalanjona vondrona bitro-voalavo amin'ny alalan'ny famadihana “sahoan-dresaka” sy “lainga” ho voaloboka. Nandefa sary-sy-soratra tany am-boalohany koa ny vondrom-piarahamonina VKontakte “Tsy Hino Izany Ianao,” izay manana mpikambana mahery ny 6,7 tapitrisa, saingy nofafany izany tamin'ny 7 May.
Nitatitra ny tranonkala Meduza fa namoaka sary-sy-soratra mamely an'i Navalny ihany koa ny vondrona VKontakte hafa, anisan'izany ny “Chaplin Devoly” sy “Eoropa Mihalò, ary efa voafafa ihany koa izany.
Toa nampahatezitra ny vondrona VKontakte fa tsy nanampy azy ireo ny sary-sy-soratra fohy manafintohina mamely an'i Navalny: Mpiserasera manodidina ny 1600 no niala tsy ho mpikambana ao amin'ny “Eoropa Mihalò,” ary manodidina ny 1.400 no nandao an'i “Ny Mpanao Fanova-maso,” araka ny tatitry ny Meduza.
Antontanisa [mampiseho ny isan'ireo niala tsy ho mpikambana] avy amin'ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina antserasera ireo. Toa hita fa tsy tian'ny olona ny [sary-sy-soratra].
Eoropa Afovoany & Atsinanana15 Oktobra 2021
Eoropa Afovoany & Atsinanana22 Septambra 2021